ချစ်တတ်သူ: မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံခြုံရေးအဆင့် တိုးမြှင့်
Share infomation of linux . ubuntu Android Etc
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံခြုံရေးအဆင့် တိုးမြှင့်
Posted by ဟိန်းထက်အောင် at Tuesday, December 16, 2014
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှု၊ တိုက်ခိုက်မှု တွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အတွက် တနိုင်ငံလုံး လုံခြုံရေး အဆင့် အနေနဲ့ အဆင့်ငါးဆင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနက် အဆင့်သုံး သတ်မှတ် ထားတဲ့ အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မှုခင်းတားဆီးရေး ဌာန မှ ရဲမှူးချုပ် စိုးမြိုင်က ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။
လုံခြံုရေး အတွက် စိုးရိမ်ဘွယ်ရာ သတင်းအချက်၊ သက်သေ အထောက်အထား စတာတွေ ထက်၊ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီး မှာ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို စောင့်ကြည့် နိုင်အောင် လုံခြံုရေး အဆင့်သုံး အထိ မြှင့်ရပုံ ကို ရဲမှူးချုပ် စိုးမြိုင်က ရှင်းပြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ လေဆိပ်ကနေ ဝင်ကြ၊ ထွက်ကြ သူတွေ ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အများပြည်သူ စုရုံးတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာ တွေ မှာ ယူနီဖေါင်းဝတ် နဲ့ရော အရပ်ဝတ် နဲ့ပါ စစ်ဆေး စောင့်ကြပ်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Unicode Only Blog
Theme And Tweak (3)
Huawei Honor Hol-U10 အတွက် ယူနီကုဒ်ဖောင့် ထည့်နည်း...
ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ဆိုနီ ရုပ်ရှင် မိတ်ဆက်ပွဲ ပ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ (၁...
မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တွေ လူထုထိတွေ့မှု နည်း
နတ်တလင်းမြို့နယ် ရေမွှေးကျေးရွာတွင် မီးလောင်မှုဖြစ...
ပါကစ္စတန် စာသင်ကျောင်း အတိုက်ခံရ၊ ၁၄၁ ဦး သေ
စားသုံးရန်မသင့်သော အေးခဲအသားများ မီးရှို့ဖျက်ဆီး
တရုတ်ရဲက မသင်္ကာသဖြင့် ရှာဖွေရာမှ မြန်မာနိုင်ငံသား...
Copyright © ချစ်တတ်သူ